ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် က ဦးဝီရသူ ကို တစ်လပိတ်အရေးယူ ..! - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် က ဦးဝီရသူ ကို တစ်လပိတ်အရေးယူ ..!
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် က ဦးဝီရသူ ကို တစ်လပိတ်အရေးယူ ..!
Apann Pyay 4:18 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ အရေးယူခံရကြောင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို မွတ်စလင်များ စီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားနေသည့် ဦးဝီရသူ၏ ဗီဒီယိုဖိုင်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ၎င်းကို အရေးယူလိုက်ကြောင်း မစိုးရိမ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူက ဗီဒီယိုဖိုင် လွှင့်တင်ကာ ကြေညာသည်။ ၎င်း အသုံးပြုနေသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အကောင့်သည် မေလ ၃၁ရက်ကစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အပိတ်ခံခဲ့ရသဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို အားကိုးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဦးဝီရသူက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် အခြားအကောင့်တစ်ခုမှ ဗီဒီယိုဖိုင်တင်၍ မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အ ကောင့်သည် Follower သုံးသိန်းခြောက်သောင်းကျော်ရှိပြီး ဇွန်လ ၁ရက်ကစ၍ပို့စ်တင်၍ မရတော့ပေ။ ဦးဝီရသူ၏ Follower ခုနစ်သောင်းကျော်ရှိသော စာမျက်နှာမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ဖျက်ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အချိန် နှစ်မိနစ်ကျော်ကြာ မြင့်သည့် အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကို လွှင့်တင်ခဲ့သည့်အကောင့်သစ်မှာ လည်း ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖျက်ချခံ ခဲ့ရသည်။
‘‘မေလ ၃၁ ရက်မှာ အရေး ယူခံထားရပါတယ်။တစ်လတိတိပိတ်မယ်လို့ သူတို့အမိန့်စာမှာပါပါတယ်’’ဟု ဦးဝီရသူကမိန့်သည်။
ဆက်လက်၍လည်း ဦးဝီရသူက ‘‘အရေးယူတဲ့ပုံစံကို ကြည့်ရင် အကြောင်းပြချက်မည်မည်ရရမရှိပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါ၊ အမည်နာမတိုက်ရိုက်မထည့်၊ အဲဒီလို လွတ်လွတ်ကင်းကင်းရေးသားတာတွေကိုလည်း ၀ိုင်းပြီး Report ထုလို့ Pageတစ်ခုလုံး ဖျက်တာလည်းပါတယ်။ တစ်လပြည့်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြန်ပွင့်ရင်လည်း မသေချာပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် Team တစ်ခုလုံး မွတ်စလင်လက်အောက်ကျရောက်သွားလို့ပါပဲ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို မွတ်စလင်တွေ စီးမိသွားပါပြီ’’ဟု မိန့်ခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူသည် ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ‘ချောင်ကြိုချောင်ကြား ကြည်လင်းများ၊ဒကာတော်ဦးကြည်လင်း ဘေးကင်းပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ’ ဟူသော လူသတ်မှုကျူးလွန်သူကို အားပေးသည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာရေးသားမှုများ တင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဦးဝီရသူသည် ကုလလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အ ထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်ဟီးလီ ကို ပြည့်တန်ဆာနှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြော ဆိုခဲ့ခြင်းကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာ အချို့က အစွန်းရောက်ဘုန်းကြီး ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ဦးဝီရသူသည် ဘာသာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား အမုန်းတရားပွားပြီး ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်စေနိုင်သော ဟောပြောမှုများ၊ အမုန်းတရားကြီးထွားစေရန် လှုံ့ဆော်ဟောပြောမှုများ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အဟန့် အတားဖြစ်စေသည့် ဟောပြောမှု များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကြား ဘက်လိုက်ဝေဖန်ဟောပြောမှု များပြုလုပ်နေပြီး ယင်းသို့ပြုလုပ် ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထား သည့် ညွှန်ကြားလွှာများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သဖြင့် မတ်လ ၁၀ ရက်ကစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တရားဟောခွင့် တစ်နှစ်ပိတ်ပင် ကြောင်း မဟနက ကြေညာထား သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ် သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် လူမှုစံ နှုန်းလမ်းညွှန်များ ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည်များတွေ့ရှိပါက မည်သူမဆို Report အနေဖြင့် တိုင်တန်းမှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍နည်းပညာဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် MIDOမှ မထိုက်ထိုက်အောင်က ပြောသည်။
‘‘Block ခံရတယ်ဆိုတာ ဘာတွေပြောလို့လဲ ကိုယ်လည်း မသိဘူး။ Report ထိတယ်ဆို တော့ တစ်ခုခုကိုထိလို့ Report ထိခံရတယ်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့။ Report ထုခံရတဲ့လူက သူကိုယ် တိုင်မှားလုိ့ အထုခံရတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို သူကိုယ်တိုင် မှန်နေ ပြီးတော့ မှားတဲ့ဘက်က အဖွဲ့အ စည်းကကြီးလို့၊ မခံနိုင်လို့ ၀ိုင်းထု တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ပြန် ပြီးစွပ်စွဲတယ်ဆိုတာက အပြောပဲ ရှိတာ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ ပေါ်လစီ ကတော့ Report ထုရင် သူ့သတ် မှတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြည့်မီသွားရင် သူကတော့ ပိတ် ပေးမှာပဲ။ သူ့အလုပ်သူ လုပ်တာ ပေါ့’’ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းအတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ရှိ အမုန်းစကား များကို ထိန်းချုပ်ရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မည်ဟု ၂၀၁၆အတွင်းက သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း လုပ်ဆောင်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် မည်သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပွင့်လင်းစွာမသိရပေ။
ထို့အပြင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် မေလအတွင်း ‘ကုလား’ဟူသော စာသားကို ရေးသားခြင်းကြောင့် Lock ကျခဲ့သည့် အကောင့်များရှိခဲ့ သော်လည်း အချို့သော အ ကောင့်များသည် ‘ကုလား’ဟု ရေးသားခြင်းကြောင့် မည်သည့် သက်ရောက်မှုမှ ကြုံတွေ့ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ‘‘ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်လစီကို ကျွန်တော်သေချာမသိတော့ မ ပြောတတ်ဘူးဗျ။ ကုလားလို့ရေး ရင် ဘန်းတာတွေကရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော် ကုလားကားဆိုတာကို ရေးတာ Lock တစ်ရက်ကျသွား တယ်။ အမှန်တော့ ဒီလောက် လေးပြောတာ မပိတ်သင့်ပါဘူး’’ ဟု Myanmar Links မှ ကိုစိုးသီ ဟနောင်က ပြောသည်။
ဖစျေ့ဘှတျချမှ အရေးယူခံရကွောငျး၊ ဖစျေ့ဘှတျချကို မှတျစလငျမြား စီးသှားပွီဖွဈကွောငျး ပွောကွားနသေညျ့ ဦးဝီရသူ၏ ဗီဒီယိုဖိုငျ
ဖစျေ့ဘှတျချက ၎င်းငျးကို အရေးယူလိုကျကွောငျး မစိုးရိမျ ဆရာတျော ဦးဝီရသူက ဗီဒီယိုဖိုငျ လှငျ့တငျကာ ကွညောသညျ။ ၎င်းငျး အသုံးပွုနသေညျ့ ဖစျေ့ဘှတျချ အကောငျ့သညျ မလေ ၃၁ရကျကစ၍ ရကျပေါငျး ၃၀ အပိတျခံခဲ့ရသဖွငျ့ ဖစျေ့ဘှတျချကို အားကိုးတော့မညျမဟုတျကွောငျး ဦးဝီရသူက ဖစျေ့ဘှတျချပျေါတှငျ အခွားအကောငျ့တဈခုမှ ဗီဒီယိုဖိုငျတငျ၍ မိနျ့ကွားခဲ့သညျ။
ဦးဝီရသူ၏ ဖစျေ့ဘှတျချအ ကောငျ့သညျ Follower သုံးသိနျးခွောကျသောငျးကြျောရှိပွီး ဇှနျလ ၁ရကျကစ၍ပို့ဈတငျ၍ မရတော့ပေ။ ဦးဝီရသူ၏ Follower ခုနဈသောငျးကြျောရှိသော စာမကျြနှာမှာ ဖစျေ့ဘှတျချက ဖကျြခလြိုကျပွီဖွဈသညျ။
အခြိနျ နှဈမိနဈကြျောကွာ မွငျ့သညျ့ အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုငျကို လှငျ့တငျခဲ့သညျ့အကောငျ့သဈမှာ လညျး ရကျပိုငျးအတှငျး ဖကျြခခြံ ခဲ့ရသညျ။
‘‘မလေ ၃၁ ရကျမှာ အရေး ယူခံထားရပါတယျ။တဈလတိတိပိတျမယျလို့ သူတို့အမိနျ့စာမှာပါပါတယျ’’ဟု ဦးဝီရသူကမိနျ့သညျ။
ဆကျလကျ၍လညျး ဦးဝီရသူက ‘‘အရေးယူတဲ့ပုံစံကို ကွညျ့ရငျ အကွောငျးပွခကျြမညျမညျရရမရှိပါဘူး။ ပုဂ်ဂိုလျရေးမပါ၊ အမညျနာမတိုကျရိုကျမထညျ့၊ အဲဒီလို လှတျလှတျကငျးကငျးရေးသားတာတှကေိုလညျး ၀ိုငျးပွီး Report ထုလို့ Pageတဈခုလုံး ဖကျြတာလညျးပါတယျ။ တဈလပွညျ့လို့ ဖစျေ့ဘှတျချပွနျပှငျ့ရငျလညျး မသခြောပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဖစျေ့ဘှတျချ Team တဈခုလုံး မှတျစလငျလကျအောကျကရြောကျသှားလို့ပါပဲ။ ဖစျေ့ဘှတျချကို မှတျစလငျတှေ စီးမိသှားပါပွီ’’ဟု မိနျ့ခဲ့သညျ။
ဦးဝီရသူသညျ ၎င်းငျး၏ ဖစျေ့ဘှတျချစာမကျြနှာတှငျ ‘ခြောငျကွိုခြောငျကွား ကွညျလငျးမြား၊ဒကာတျောဦးကွညျလငျး ဘေးကငျးပါစေ၊ ကိုယျဆငျးရဲကငျးပါစေ၊စိတျဆငျးရဲကငျးပါစေ’ ဟူသော လူသတျမှုကြူးလှနျသူကို အားပေးသညျ့ အငွငျးပှားဖှယျရာရေးသားမှုမြား တငျခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ ဦးဝီရသူသညျ ကုလလူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ အ ထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စရနျဟီးလီ ကို ပွညျ့တနျဆာနှငျ့ ခိုငျးနှိုငျးပွော ဆိုခဲ့ခွငျးကို နိုငျငံတကာမီဒီယာ အခြို့က အစှနျးရောကျဘုနျးကွီး ဟု ချေါဆိုခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျဦးဝီရသူသညျ ဘာသာ တဈခုနှငျ့တဈခုအကွား အမုနျးတရားပှားပွီး ဘာသာရေးအဓိကရုဏျးဖွဈစနေိုငျသော ဟောပွောမှုမြား၊ အမုနျးတရားကွီးထှားစရေနျ လှုံ့ဆျောဟောပွောမှုမြား၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကို အဟနျ့ အတားဖွဈစသေညျ့ ဟောပွောမှု မြားနှငျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြားကွား ဘကျလိုကျဝဖေနျဟောပွောမှု မြားပွုလုပျနပွေီး ယငျးသို့ပွုလုပျ ခွငျးသညျ နိုငျငံတျောသံဃမဟာနာယကအဖှဲ့က ထုတျပွနျထား သညျ့ ညှနျကွားလှာမြားကို ဖောကျဖကျြကြူးလှနျသဖွငျ့ မတျလ ၁၀ ရကျကစ၍ တဈနိုငျငံလုံးတှငျ တရားဟောခှငျ့ တဈနှဈပိတျပငျ ကွောငျး မဟနက ကွညောထား သညျ။
ဆိုရှယျမီဒီယာတဈခုဖွဈ သညျ့ ဖစျေ့ဘှတျချသညျ လူမှုစံ နှုနျးလမျးညှနျမြား ခမြှတျထားပွီးဖွဈကွောငျး စံနှုနျးနှငျ့ကိုကျညီမှုမရှိသညျမြားတှရှေိ့ပါက မညျသူမဆို Report အနဖွေငျ့ တိုငျတနျးမှုပွုလုပျနိုငျကွောငျး ဖစျေ့ဘှတျချမူဝါဒနှငျ့ပတျသကျ၍နညျးပညာဆိုငျရာ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးဖွဈသညျ့ MIDOမှ မထိုကျထိုကျအောငျက ပွောသညျ။
‘‘Block ခံရတယျဆိုတာ ဘာတှပွေောလို့လဲ ကိုယျလညျး မသိဘူး။ Report ထိတယျဆို တော့ တဈခုခုကိုထိလို့ Report ထိခံရတယျလို့ ပွောလို့ရတာပေါ့။ Report ထုခံရတဲ့လူက သူကိုယျ တိုငျမှားလို့ အထုခံရတာလညျး ဖွဈနိုငျသလို သူကိုယျတိုငျ မှနျနေ ပွီးတော့ မှားတဲ့ဘကျက အဖှဲ့အ စညျးကကွီးလို့၊ မခံနိုငျလို့ ဝိုငျးထု တာလညျးဖွဈနိုငျတာပေါ့။ ပွနျ ပွီးစှပျစှဲတယျဆိုတာက အပွောပဲ ရှိတာ။ ဖစျေ့ဘှတျချရဲ့ ပျေါလစီ ကတော့ Report ထုရငျ သူ့သတျ မှတျထားတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ပွညျ့မီသှားရငျ သူကတော့ ပိတျ ပေးမှာပဲ။ သူ့အလုပျသူ လုပျတာ ပေါ့’’ဟု မွနျမာနိုငျငံ ကှနျပြူတာ ပညာရှငျအသငျးအတှငျးရေးမှူး ဦးမငျးက ပွောသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ အစိုးရသညျ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါရှိ အမုနျးစကား မြားကို ထိနျးခြုပျရနျ ဖစျေ့ဘှတျချ ကုမ်ပဏီနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ မညျဟု ၂၀၁၆အတှငျးက သတငျးမြားထှကျပျေါခဲ့သျောလညျး လုပျဆောငျနခွေငျး ရှိ၊ မရှိနှငျ့ မညျသို့ လုပျကိုငျဆောငျရှကျနကွေောငျး ပှငျ့လငျးစှာမသိရပေ။
ထို့အပွငျ ဖစျေ့ဘှတျချတှငျ မလေအတှငျး ‘ကုလား’ဟူသော စာသားကို ရေးသားခွငျးကွောငျ့ Lock ကခြဲ့သညျ့ အကောငျ့မြားရှိခဲ့ သျောလညျး အခြို့သော အ ကောငျ့မြားသညျ ‘ကုလား’ဟု ရေးသားခွငျးကွောငျ့ မညျသညျ့ သကျရောကျမှုမှ ကွုံတှခေဲ့ခွငျး မရှိပေ။ ‘‘ဖစျေ့ဘှတျချပျေါလစီကို ကြှနျတျောသခြောမသိတော့ မ ပွောတတျဘူးဗြ။ ကုလားလို့ရေး ရငျ ဘနျးတာတှကေရှိသေးတယျ။ ကြှနျတျော ကုလားကားဆိုတာကို ရေးတာ Lock တဈရကျကသြှား တယျ။ အမှနျတော့ ဒီလောကျ လေးပွောတာ မပိတျသငျ့ပါဘူး’’ ဟု Myanmar Links မှ ကိုစိုးသီ ဟနောငျက ပွောသညျ။